Mogadishu Journal » Coman oo u socda Man Utd? Bayern waligeed moggolaan neyso, ayuu yiri Salihamidzic
Kingsley Coman ayaa lagu soo waramayaa inuu bartilmaameed u ahaa Manchester United, laakiin Bayern Munich uma ogolaan laheyn ciyaaryahanka garabka ka ciyaara inuu baxo.
Ma jirin wax fursad ah oo ay Bayern Munich u oggolaan lahayd inuu Kingsley Coman ku biiro Manchester United inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga, ayuu yidhi Hasan Salihamidzic.
Xiddiga heerka caalami ee dalka Faransiiska Coman ayaa lala xiriirinayay inuu u dhaqaaqayo Old Trafford ka hor inta aan la gaarin waqtiga ugu dambeeya ee todobaadkii hore.
United ayaa lagu soo waramayaa inay bartilmaameed ka dhigatay xiddigii hore ee garabka ka ciyaara ee Juventus ka dib markii ay ku guuldareysatay inay la kulanto Borussia Dortmund qiimaha ay ku dooneysay Jadon Sancho.
Coman ayaa dhaliyay goolka guusha ee kooxda Bavaria finalkii Champions League ay kaga badiyeen Paris Saint-Germain bishii Ogosto ka dib markii uu ka soo laabtay dhaawac muruqa ah.
Agaasimaha isboortiga Bayern Salihamidzic ayaa shaaca ka qaaday in ogolaanshaha Coman inuu ka tago aan marnaba laga fiirsan.
“Waxba ma jirin, mana aanan baari lahayn sidoo kale,” ayuu u sheegay Sport Bild.
Hadafkiisa finalka Champions League waa inuu sharaxaad ka bixiyo sababta aan ugu kalsoonaanayno isaga si kal iyo laab ah. ”
Salihamidzic ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in kooxda hanatay seddexleyda xilli ciyaareedka 2019-20 aysan awoodi karin inay heshiis la gaaraan Chelsea oo ku aadan saxiixa ciyaaryahanka garabka ka ciyaara Callum Hudson-Odoi
Wuxuu intaa ku daray: "Waxaa jira kala iibsiyo imaaneysa heer aad dhahdo: 'Waa inaan si deg deg ah uga tagno tan.'
"Aad ayey muhiim u tahay in qofku ka fikiro waxyaabo kale ama dariiqyo kale bilowgiiba. Waxaan la xaajoonnay Chelsea laakiin ma jirin wax heshiis ah. Taasi way dhacdaa."